Kuita NeVane Strongman Minamato YePfungwa | MINYENGETERO MARI
musha Uncategorized Kuita NeVane Simba Strongman Minamato
Mako 3: 23-27:
23 Zvino akavadanira kwaari, akati kwavari nemifananidzo, Satani ungabudisa Satani sei? 24 Uye kana ushe hwakapesana hwakazvimirisana, ushe uhwo hahungagoni kumira. Kana imba yakapesana ichimirisana, imba iyo haigoni kumira. Uye kana Satani achizvimukira, akapatsanurwa, haagoni kumira, asi kuguma. 25 Hakuna munhu ungapinda mumba mehamburamakaka, akapamba nhumbi dzayo, kunze kwekuti atanga kusunga murume ane simba; uyezve achapamba imba yake.
Kuti iwe ufambire mberi muhupenyu semutendi, iwe unofanirwa kubata neese madhimoni strongman muhupenyu hwako uye yemhuri. Anesimba mweya wedhimoni uye inodzvinyirira iyo inorwisa kupesana nekubudirira kwako mumatunhu ese ehupenyu hwako. Kusvikira iwe wakasunga munhu akasimba muhupenyu hwako, haugone kuve mutendi anobudirira. Madhimoni vakasimba isimba remweya, iro rinoisa madziro pakati pako nebudiriro yako muhupenyu. Asi nhasi uno murume wese akasimba muhupenyu hwako anofanira kupa nzira muzita raJesu. Ini ndanyora makumi manomwe ndichibata nemasimba manamato mapoinzi. Munamato uyu unonongedzera nhare yako yekubata neane simba. Hazvina mhosva kuti wanga wabatwa akasungwa nemadhimoni aya riinhi, paunoita minamato iyi nhasi, ndiri kukuona uchikunda munhu wese akasimba muhupenyu hwako muzita raJesu.
Munamato ndiyo kiyi yekubudirira kwese. Sevatendi, isu tinonzwisisa kuti zvemweya zvinodzora zvepanyama uye kusvikira iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinazvo Izvi zvinobata nemasimba ekunamatira akasimba zvinokugonesa iwe kutarisira zvemweya kuti uzviitire nzira yekuti ubudirire mune zvepanyama. Matambudziko ese ane mhinduro, zvisinei kuti murume wako akasimba chii, nhasi paunobata minamato iyi, unenge wasununguka kwavari ini Jesu zita. Tisati tapinda munamato dzekunamatira, ini ndoda kuti titarise kune vamwe vevane simba vatichange tichinamata navo. Izvi zvichatibatsira kuti tinzwisise minamato yedu, nekudaro tichipa minyengetero yedu kutarisa Iwe haugone kurwisa zvausingazive. Heano mamwe madhimoni akasimba isu tichave tichipesana nawo muminamato yanhasi.
10 Dhimoni Anesimba
1). Iwo Iwo Mweya Wokusabereka: Izvi zvinosanganisirawo, kubereka kwechibereko, hurombo, uye kushomeka nezvimwe
2). Omweya wekusimuka: Izvi zvinosanganisira, kufambira mberi zvishoma, hapana kufambira mberi, kudzoka kumashure etc.
3). Kuongorora uye Midzimu inoshamwaridzana: Izvi zvinosanganisira mweya wekuuka, huroyi, juju, satanism, mashura, verenga, varoyi, masvikiro, masvikiro
4). Iwo mweya weRuchiva: Izvi zvinosanganisira mweya weunzenza, kuona zvinonyadzisira, ufeve, kuchiva, hupombwe, humhandara, tsika dzese dzinorambidzwa mubhaibheri.
5). Omweya wekushungurudzika: Izvi zvinosanganisira mweya wekusuwa, kushaya tariro, kuremerwa, kushushikana, kupera simba etc
6). Iwo Iwo mweya wekuchiva: Izvi zvinosanganisira kuda kweMari, rudo rwezvinhu zvepanyika, uye nerudo rwenyika ino.
7). IwoMweya Wenhamo: Izvi zvinosanganisira hosha nezvirwere, marudzi ese ezvirwere.
8). Omweya wekuvhiringidzika: Izvi zvinosanganisira kusavapo kwepfungwa, nzira yakaderera yehupenyu, hupenyu husina chinangwa.
9). Midzimu yeAcestral: Izvi zvinosanganisira vanamwari vanowanikwa kubva kuimba yevabereki vako.
10). IwoMweya Werufu: Izvi zvinosanganisira mweya wekufa usingafungidzirwe, kufa nekukasira kwekufa kwevakundi vechingwa, izvi zvinogona kukunda mumhuri.
Kune madhimoni mazhinji akasimba anomira munzira yedu, hatimbofa takadzima rondedzero, asi nezviri pamusoro ndinotenda une fungidziro yezvatiri kutaura nezvazvo. Ndinokukurudzira kuti ubatanidze idzi minamato yemunamato nekutenda kwese mumoyo mako. Kusvikira ivo vakasimba vakundwa, haungambobudirira muhupenyu. Bata izvi uchibata nemasimba munamato mapoinzi nhasi uye uone hupenyu hwako hwachinja kuve nani.
1. Moto waMwari !!!, paradza munhu wese akasimba mumhuri yangu, muzita raJesu.
2. Ini ndinopedza nzvimbo dzemurume ane simba mumhuri yangu nemoto waMwari, muzita raJesu.
3. Ini ndinosunungura moto, maburi uye mabwe chimvuramabwe pane vese vane simba muhupenyu hwangu uye nemhuri, muzita raJesu.
4. Nesimba roMweya Mutsvene, ini ndinokunda uye ndinotonga munhu wese akasimba mumhuri yangu muzita raJesu.
5. Ini ndinorova musoro wemhare pamadziro emoto, muzita raJesu.
6. Rega guva rizarure muromo waro zvisina chiyero uye kumedza vese vane simba remadhimoni muhupenyu hwangu muzita raJesu.
7. Chiitiko chose chakaipa chakandimukira nevarume mumhuri yangu, vachadzokera nemuzita raJesu.
8. Mutumwa waMwari ngaakungurire mabwe emoto kuti arege murume ane simba munzira dzangu, muzita raJesu.
9. Ndinotaura ruzvidzo kuruzhinji kune vese vane simba mumhuri yangu, muzita raJesu.
10. Rega vavengi vese vemweya wangu vatange mazuva avo nevhiringidziro voregedze mukuparadzwa, muzita raJesu.
11. O Ishe, sunungura kubva mupfungwa dzangu chero mufananidzo wegodo, kuchiva uye zvakaipa zvakaipa.
12. Ndinomirisana nevese madhimoni vachindirwisa uye ndinovaparadza, muzita raJesu.
13. O Ishe, regedzai hupenyu hwangu hwomukati kuti ndikunzwei zvakajeka uye zuva nezuva muzita raJesu
14.Ishe, vhura maziso angu kuti uone zvawakaisa pachena mukati mangu muzita raJesu.
15. O Ishe, nemweya wako, nditungamirire kunzira yakanaka muhupenyu muzita raJesu
16. O Ishe, geza pfungwa dzangu neropa raJesu uye bvisa zvakaipa zvakashata zvakanyorwa mumuviri ipapo.
17. Ishe, poresai chero kukanganisa kwehomoni kana kumwe kuvhara mumuviri wangu muzita raJesu.
18. O Ishe, poresai mandiri chero chinoda kuporeswa munaJesu zita muvengi, muzita raJesu.
19. O Ishe, chinja mandiri chero chinoda kutsiviwa muzita raJesu
20. O Ishe, shandura mandiri chero chinoda kushandurwa muzita raJesu
21. O Ishe, regai Simba renyu rekuporesa riyerere mukati mangu muzita raJesu
22. Rega varwi vanobva kumativi maviri emhuri yangu vatange kuzviparadza ikozvino, muzita raJesu.
23. Murume akasimba kubva kudivi rababa vangu, akasimba kubva kudivi raamai vangu, tanga kuzviparadza iwe, muzita raJesu.
24. Ini ndinoramba kupfeka chipfeko chekusuwa, muzita raJesu.
25.Vose vanodzingirira vakasindimara muhupenyu hwangu, ndinokuraira kuti ufe, muzita raJesu.
26. Miseve yese ya satanic iripo muhupenyu hwangu, pererwa nesimba rako, muzita raJesu.
27. Lethi yega yega yakarongeka inopesana nehupenyu hwangu ngaafe mitezo, muzita raJesu.
28. Ini ndinodzokera kune inotumira miseve yose yaSatani yekushushikana pamucheto wemabhurugwa angu, muzita raJesu.
29. Ini ndinodzokera kune anotumira miseve yese ya satan yehurwere hwepamweya nepamoyo, muzita raJesu.
30. Ini ndinodzokera kune anotumira miseve yose yaSatani yekushaya simba mumunamato uye kuverenga kweBhaibheri, muzita raJesu.
31. Ndinodzosera kune anotumira miseve yese yasatani yekutadza bhizinesi, muzita raJesu.
32. Ini ndinodzoka kumutumira iyo miseve yakaipa kubva kumuvengi wemba, muzita raJesu.
33. Ndinodzosera kune anotumira miseve yose yakaipa kubva kushamwari dzangu dzisingafarire, muzita raJesu
34. Baba, ndinozivisa kudzoreredzwa kanomwe pane zvakanaka zvangu zvese zvakaponeswa nemiseve yaSatani, muzita raJesu.
35. Ini ndinofukidza hupenyu hwangu uye zvinhu zvangu zvese kubva kumiseve ya satan neropa raJesu Kristu.
36. Ini ndinoparidza nhasi kuti magedhi egehena haazokunda hupenyu hwangu muzita raJesu
37. Ini ndinoraira nyonganiso nekuparadzira ndimi pakati pemasangano ese akaipa anomiririra runyararo rwehupenyu hwangu, muzita raJesu.
38. Ita kuti hungwaru hwevapi vezvakaipa vakaipa muhupenyu hwangu huitiswe pasina, muzita raJesu.
39. O Ishe, kukonzera supernaturall kuputika mumabasa emaoko angu muzita raJesu.
40. Hupenyu hwangu ngazvivharwe neparutivi rwemoto uye regai ndive ndakanyudzwa uye ndakafukidzwa neropa raJesu.
41. O Ishe, ini ndinonyaradza marimi ese akaipa vanotaura zvakaipa pamusoro pangu, ndinoparidza kuti kuchavapo mazwi anovapikisa muzita raJesu.
42. Runyoro rwese runopesana nerunyararo rwangu ngaruwane zvinonyadzisa, muzita raJesu.
43. Rega mutongo upi zvawo ungatorwa neni neumwe munhu ane simba ashandiswe pasina, muzita raJesu.
44. Ini ndinodzokera kune anotumira museve wese wedhimoni wakanangidzirwa kwandiri nemhuri yangu, muzita raJesu.
45. Ini ndinodzokera kune uyo anotumira chero zvombo zvemweya zvakarongedzwa kwandiri, muzita raJesu.
46. ​​Ndinozvisimbisa nesimba roMweya Mutsvene muzita raJesu! E
47. Ini ndinosunga uye handisi kupa chose avo vese vane masimba varikunetsa hupenyu hwangu, muzita raJesu.
48. Ini ndinonyadzisa vese vakapihwa vamiriri vaSatan muzita raJesu
49. Ishe ndinotema chirevo cheavo vese vane simba vakamira munzira yangu yekukura muzita raJesu
50. Simba rega revadzvinyiriri pamusoro pehupenyu hwangu riparadzwe muzita raJesu.
51. Rega zvinhu zvangu zvinyanye kupisa kuti muvengi abate, muzita raJesu.
52. Ndinotora makomborero angu kubva kumusasa wevarwi vakaipa, muzita raJesu.
53. Ini ndinosuka mweya yakaipa yese yakadyarwa muhupenyu hwangu nevarume vane simba, muzita raJesu.
54. Rekusimudzira kwangu kuratidze zvine simba, muzita raJesu.
55. Ndinodzinga mauto ese akasangana kuti anditonge, muzita raJesu.
56. Rega masimba ese anopesana-ufakazi apararire, muzita raJesu.
57. Rega kufara kwemuvengi pahupenyu hwangu kushanduke kusuwa, muzita raJesu.
58. Ini ndinoremedza homwe yega yega nemakomba, muzita raJesu.
59. Rega Simba rako, Mbiri yako nehumambo zviuye pamusoro pehupenyu hwangu, muzita raJesu.
60. Regai vese vanonwa ropa nevanodya nyama vatange kudya nyama yavo nekunwa ropa ravo nekugutsikana, muzita raJesu.
61. Ndinotaura rusununguko rwakazara munzvimbo dzese dzehupenyu hwangu, muzita raJesu.
62. Ndinotaura kukunda kwakazara munzvimbo dzese dzehupenyu hwangu, muzita raJesu.
63. Ini ndinozivisa kuti ini ndiri kukunda vanokunda muzvinhu zvese zvehupenyu hwangu, muzita raJesu.
64. Ini ndinotyora simba rechero dhimoni rinopihwa rinopokana nehupenyu hwangu, muzita raJesu.
65. Ndinozivisa kuti rombo rakanaka mubhizinesi rangu nebasa rangu raenda zvachose muzita raJesu.
66. Ini ndinobvisa mabara uye mfuti dzose dzakaitwa kuti dzivepo, muvengi, muzita raJesu.
67. Ndinosunga mweya werufu negehena pamusoro pehupenyu hwangu, muzita raJesu.
68. Baba, ndinokutendai nekuisa munhu wese akashata akasimba muhupenyu hwangu pasi petsoka dzangu muzita raJesu.
69. Baba, ndinokutendai nekundipa rukundo pamusoro peavo vese vane simba muzita raJesu.
70. Tenda Ishe nemunamato wakapindurwa.
Previous nyaya70 Mharidzo Dzeminamato Yakavhurika Matenga
inoteveraMakumi mashanu Emuhondo dzeMweya minamato Yekuputsa Kwemari
Vicki Cook Ndira 19, 2020 At 8:43 pm
Festus N Idahosa Zvita 28, 2020 At 5:26 am
Ameni & Ameni, zvichave saizvozvo muzita raJesu.
jennifer Ndira 7, 2021 At 7:19 pm
waita hako! inobatsira zvikuru
5 Zviratidzo Kuti Uzive Iwe Une Kudanwa kwaMwari
Mapisarema 6 Iwo Mharidzo Ndima Ndima